जब तपाईले पेटको अल्ट्रासाउण्ड गर्नुहुन्छ तब के हुन्छ ? जानी राखौँ – Etajakhabar
जब तपाईले पेटको अल्ट्रासाउण्ड गर्नुहुन्छ तब के हुन्छ ? जानी राखौँ
ताजा खबर :- अल्ट्रासाउण्ड स्क्यानिङ्ग जसलाई सोनोग्राफी पनि भन्ने गरिन्छ । यस प्रविधिको प्रयोग शरीरको भित्रको अङ्ग र कोशिकालाई हेर्नको लागि गरिन्छ । शरीरको भित्रको संरचनाको आकृति रूपमा देखाउनको लागि यसमा उच्च आवृत्तिको ध्वनि तरङ्गको उपयोग गरिन्छ । जसलाई मानिसले सुन्न सक्दैनन् ।
के हो अल्ट्रासाउण्ड ?
अल्ट्रासाउण्ड नरम वा तरल पदार्थले भरिपूर्ण अङ्गलाई उत्कृष्ट आकृतिहरूको उत्पादन गर्छ, तर यो हावाले भरिपूर्ण अङ्ग वा हड्डीको जाँचको लागि कम प्रभावकारी हुन्छ । अल्ट्रासाउण्ड एक सुरक्षित र दुखाईरहित परिक्षण हो । यसमा सामान्य रूपमा १५ देखि ३० मिनेट लाग्छ । अल्ट्रासाउण्डमा तपाईको शरीरको भित्र संरचनाको अपेक्षाकृत सही आवृत्तिको उत्पादन गर्नको लागि उच्च आवृत्ति ध्वनि तरङ्गलाई उपयोग गरिन्छ । अल्ट्रासाउण्डको माध्यमले शरीरको भित्र हुने हलचल वा कुनै पनि गडबडीलाई पारदर्शिताको साथ देख्न सकिन्छ अर्थात् अल्ट्रासाउण्ड फोटोकोपि जस्तै हो । जून ध्वनि तरङ्ग ठोक्केर फिर्ता आउँछ । त्यसलाई अल्ट्रासाउण्ड साउण्ड मार्फत मापन गरिन्छ र शरीरको ती विशेष क्षेत्रको एक आकृतिमा परिवर्तन गरिन्छ ।
किन गरिन्छ अल्ट्रासाउण्ड:-
तपाईलाई विभिन्न कारणले गर्दा अल्ट्रासाउण्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै:- भ्रुणको आकलन, पित्ताशयको थैली रोगको निदान, रक्तनलीमा प्रवाहको मुल्यांकन, बायोप्सी वा ट्युमरको उपचार, एक स्तन गाँठोको मुल्यांकन, थाइरोइड ग्रन्थीको जाँच, मुटुको अध्ययन, संक्रमणको केहि रूपको निदान, क्यान्सरको केहि रोगको निदान, लैङ्गिक र प्रोस्टेटमा असामान्यताको बारेमा पत्ता लगाउन सहज हुन्छ ।
अल्ट्रासाउण्डबाट मानसिक विकासमा बाधा आउँछ । यसबाट निस्कने रेडियोएक्टिभ तरङ्गबाट बच्चाको मस्तिष्कमा नकारात्मक असर पर्छ । लगातार अल्ट्रासाउण्ड गराउनाले डीएनए सेल्सलाई नोक्सान पुग्ने र यसको साथै शरीरमा ट्युमर सेल्स पनि बन्न थाल्छ । जसले मृत्यूको जोखिम बढाउँछ ।
अल्ट्रासाउण्ड परीक्षा खासगरेर रोग निदानको लागि आवश्यक बहुमूल्य जानकारी जस्तै रोगको स्थिति एवम् त्यसको पुष्टि आदि प्रदान गर्छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, बैशाख २४, २०७४ समय: १७:२३:०६